Madaxweynaha la doortay ee Gambia Adama Barrow oo lagu dhaariyay gudaha dalka Senegal - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha la doortay ee Gambia Adama Barrow oo lagu dhaariyay gudaha dalka Senegal
Madaxweynaha la doortay ee Gambia Adama Barrow oo lagu dhaariyay gudaha dalka Senegal
January 19, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha la doortay ee Gambia Adama Barrow oo lagu dhaariyay gudaha dalka Senegal. [Sawirka: Twitter]
Dakar-(Puntland Mirror) Adama Barrow, ninka ku guuleystay doorashada lagu murmay ee dalka Gambia, ayaa loo caleemo-saaray madaxweyne.
Waxaa lagu dhaariyay safaarada uu dalkiisu ku leeyahay dalka Senegal, isaga oo amray askarta Gambia in ay ku sugnaadaan xeryahooda.
Waxa uu aqoonsi ka helay caalamka. Balse ninka awooda badan Yahya Jammeh ayaa diiday in uu xilka ka dego iyada oo wakhtiga xil hayntiisa ay baarlamaanka u kordhiyeen.
Hoggaamiyaasha Galbeedka Afrika ayaa ku guuldareystay in ay Mr Jammeh ka dhaadhiciyaan in uu xilka ka dego. Waxayna ugu hanjabeen in ay awooda uga tuuri doonaan xoog milatari.
Mr Jammeh ayaa looga guuleystay doorashadii bishii December kowdeedii, ee sanadkii lasoo dhaafay 2016-ka, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinku.
Danjireyaasha wadamada Reer Galbeedka u jooga gudaha caasimada Senegal ee Dakar, Safiirada Qaramada Midoobay u qaabilsan Galbeedka Afrika iyo saraakiisha urur goboleedka Ecowas ee ay ku midoobeen wadamada Galbeedka Afrika ayaa ka qeybgalay munaasabada caleemo-saarka, iyada oo boqolaal qurbajoog Gambian ah ay isugu soo uruureen banaanka xarunta safaarada oo ay munaasabada ka dhacday.
Ciidamada milatariga Galbeedka Afrika ayaa xarumo ka sameystay xudduda, iyaga oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay xoog xilka uga dejiyaan Yahya Jammeh.
Ecowas iyo Senegal ayaa dabada ka riixaya in Golaha Aamaanka ee Qaramada Midoobay ay farageliyaan.
Nayjeeriya ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay dul heehaabayaan hawada Gambia si ay u kormeeraan.
Afhayeen u hadlay ciidamada hawada ee Nayjeeriya ayaa sheegay in ay awood u leeyihiin in ay qaadaan duqaymo.
Dhanka kale, baarlamaanka Gambia ayaa shegay in wakhtiga xafiiska ee Jammeh maanta oo 19 bisha Janaayo ku beegantahay uu ku ekaa, in ay ugu dareen saddex bilood.
Wasiirka warfaafinta Gambia Sidie Njie ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo Khamiis ah in Mr Jammeh uusan xafiiska ka tagi doonin.
January 24, 2017 Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia oo haweenay u magacaabay madaxweyne ku-xigeen
January 19, 2017 Ciidamada Senegal oo gudaha u galay dalka Gambia si ay dabada uga riixaan madaxweynaha cusub Adama Barrow
January 21, 2017 Hoggaamiyaha mudada dheer ee Gambia Yahya Jammeh oo aqbalay in uu xilka ka dego
December 2, 2016 Yahya Jammeh oo looga guuleystay doorashada madaxweynaha kadib 22-sanno oo uu hoggaaminayay dalka Gambia
Ciidamada Senegal oo gudaha u galay dalka Gambia si ay dabada uga riixaan madaxweynaha cusub Adama Barrow
Ugu yaraan sideed askari oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qarax weyn ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho maanta oo Sabti ah. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa oo uu waday qof naftiis halige ah ayaa lagu beegsaday xarun ciidan [...]
13 Al-Shabab fighters killed in US airstrike in Lower Shabelle region
The United States military says it has killed 13 members of the al-Shabab extremist group with an airstrike 30 miles (48 kilometers) outside Somalia’s capital. A U.S. Africa Command statement says Friday’s strike occurred near [...]